Minista Intanet - Chọọchị Kraịst
"N'ihi na m maara atụmatụ m nwere maka gị," ka Onye-nwe kwuru.
Jeremiah 29: 11 GỤKWUO
Owuwe ihe ubi dị ezigbo mma Nwee ume n'ihi na Onyenwe anyi na-akppo unu n'oru Ya.
Gee otu n'ime okwu okwu anyi
Na-amụ Bible site na akwukwo nke akwukwo nso ayi
Kedu ihe m ga-eme ka a zọpụta m?
The ụka Kraist
Ole ndị bụ ụka Kraịst na ihe ha kweere?
Anyị bụ ndị na-enweghị akwụkwọ, anyị enweghịkwa isi ụlọ ọrụ ma ọ bụ onyeisi oche. Isi nke ụka abụghị onye ọzọ karịa Jizọs Kraịst (Ndị Efesọs 1: 22-23).
Ọgbakọ ọ bụla nke ụka dị iche iche nke Kraịst kwadoro, ọ bụkwa Okwu Chineke nke na-eme ka anyị baa n'otu Otu (Ndị Efesọs 4: 3-6). Anyị na-agbaso ozizi Jizọs Kraịst na Ndịozi ya dị nsọ, ọ bụghị ozizi mmadụ. Anyị bụ Ndị Kraịst naanị!
A Ozi nke olile-anya na nkwusi
ị -achọ maka ọhụrụ ezinụlọ ụka ịmụta na ife ofufe? Anyị ga-ahụ n'anya mara ihe banyere gị na ezinụlọ gị. Nzukọ Kraist nke Kraịst nabatara gị.
Na-achọ anyị ọhụrụ Ozizi? Gee ntị ma ọ bụ budata otu ubochi taa. Nweta anyị okwuchukwu iji nụ site n'aka ọtụtụ ndị nkwusa n'ụwa nile.
Na-ege ntị na okwuchukwu
Sonyere anyị Sunday a maka ofufe! Anyị nwere ọtụtụ puku ọgbakọ n'ụwa nile maka nkwekọrịta gị. Gaa na ntanetị akwụkwọ ntanetị anyị iji chọta ụka dị gị nso.
ịmụta Banyere Chọọchị anyị
Anyị na-ekwu ebe Bible na-ekwu okwu, anyị na-anọ jụụ ebe Bible na-agbachi nkịtị. Anyị bụ ndị na-enweghị akwụkwọ, anyị enweghịkwa isi ụlọ ọrụ ma ọ bụ onyeisi oche.
Gụkwuo Ihe nzuko Kraist
Isi nke ụka abụghị onye ọzọ ma ọ bụghị Jizọs Kraịst n'onwe ya (Ndị Efesọs 1: 22-23).
Ihe i nwere ike ichere
mgbe anyị na-eleta anyị Ekpere: N'oge ofufe, ọtụtụ n'ime ndị ikom ga-edu ọgbakọ ahụ n'ekpere ihu ọha.
We fee Chineke ke spirit ye ​​ke akpanikọ
Ịbụ abụ: Anyị ga-abụ abụ dị iche iche na abụkọ ọnụ, otu onye ma ọ bụ karịa ndị ndu egwu. A ga-akpọ ha ụda capella (na-enweghị ihe egwu).
Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị: Anyị na-eri Nri Anyasị nke Onyenwe Anyị kwa Sunday, na-agbaso ụkpụrụ nke ụka nke narị afọ mbụ.
Site n'inweetiti 7,000 na ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke nde 104, Filipinz bụ mba dị mkpa na ụzọ nrịgoro dị na Asia.
Chọpụta otú Ịbanye
Ọtụtụ Filipinos na-arụ ọrụ na China, mba ndị ọzọ Asia, na ọbụna obodo etiti ọwụwa anyanwụ, ebe ha nwere ọkwá dị elu. Ọrụ dị mkpa na oge maka Player Solar.
Ụlọ Nzukọ Onyenwe anyị anọwo na Philippines ruo ọtụtụ afọ n'ihi mgbalị ndị gara aga na nke ugbu a. Taa, a na-eme atụmatụ ọgbakọ 800.
Anyị nwere obi ụtọ banyere ihe
Isi nke Kraist
Nzukọ Kraist nke Kraịst nabatara gị ka anyị soro Onyenwe anyị fee anyị. Anyị nọ ebe a iji jeere Chineke ozi ma nyere gị aka na ije gị na Onyenwe anyị. Gaa na chọọchị nke Kraịst nọ n'ógbè gị. Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ezinụlọ Chineke. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịbụ nke ọ bụla ọrụ gị biko egbula ịkpọ oku ma ọ bụ ide.
Mụtakwuo maka anyị
Gụọ Anyị Blog
"Chọọchị Kraịst bụ kpọmkwem ihe mụ na ezinụlọ m na-achọ na mkpa. Anyị na-enwe ekele maka ndịọrụ na-ahụ maka Ịntanet maka ịkọrọ anyị ozioma nke Kraịst. Chineke dị mma! "
Anyị Ozi ntanetị
Silbano Garcia, II. Onye nkwusa ozioma
Silbano Garcia, II. eje ozi dị ka onye nkwusa ozioma maka ụka nke Kraịst, ọ bụkwa onye guzobere ndị ọrụ ntanetị. Nwanna Garcia emeela ozi ala ọzọ na steeti California, Colorado, Florida, Idaho, Iowa, New York, na Texas. O kwusawokwa ozi ọma na nzukọ ụwa niile. Na May 1, 1995 ọ na-enye aka n'iwepụta Ọnụ Ụzọ Ịntanetị mbụ maka ụka nke Kraịst n'ụwa niile na www.church-of-Christ.org. Ozi a n'Ịntanet na-aga n'ihu na ebe nrụọrụ weebụ maka ụka nke Kraist n'ụwa nile.
A maara Nwanna Garcia dịka onye nkwusa ozioma na onye ọsụ ụzọ na ntanetị nke Ịntanetị. O nyewo aka iji nyere ọtụtụ narị ọgbakọ aka iji Internet mee ihe maka mgbasa ozi nke Oziọma Jizọs Kraịst. Mgbalị ndị ọ na-eme n'Ịntanet na-achọpụta na ndị isi ụka dị iche iche gụnyere ụwa.
Mụtakwuo Ihe gbasara Ngalaba Ministụ